ဦးသိန်းတန် ဘာ့ကြောင့် အခုလိုပြောရလဲဆိုတာ ပြောလာတဲ့ အိမ့်ချစ် - Tameelay
ဦးသိန်းတန်ဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေးလိုက်တဲ့ အိမ့်ချစ်
Myanmar Idol ကတော့ လက်တလောမှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးနေတဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲပါ။ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ အတော်လေး လူပြောများနေတဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲပါ။ပြိုင်ပွဲ တစ်ခု ပြီးတိုင်းလည်း ဝေဖန်ပြောဆိုသံတွေ အများ ကြီး ထွက်ပေါ်လေ့ရှိတဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲပါ။ဇူလိုင်လ(၁၉)ရက်နေ့ညက Myanmar Idol Season3ရဲ့ Rock Week ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲကတော့ ပရိသတ်တွေရော၊အနုပညာရှင်အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာပါ အတော်လေးကို လူပြောများနေပါတယ်။ဒိုင်ေ တွ၊ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအပေါ်ဝဖန် ပြောဆိုသံတွေလဲ အများကြီးကို ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။လက်တလောမှာ ဒိုင်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အန်ကယ်ဦးသိန်းတန်အပေါ် ဝေဖန်ပြောဆိုသံတွေ အများကြီး ထွက်ပေါ် နေပါတယ်။ အဆိုတော် အိမ့်ချစ်ကတော့ သူများတွေက ပြောဆိုဝေဖန်နေကြတဲ့ မြန်မာပြည်ဦးသိန်းတန်ဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေးလိုက်ပါတယ်။
“အန်ကယ့်ကိုအပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့ခွာ အစီအစဉ်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာဖို့ သူကဇာတ်လမ်းစနေရတာပါ ဒါမှလူတွေပါးစပ်ဖျား ပြောစမှတ်တွေဖြစ်လာမယ် လူပြောများမှပိုအောင်မြင်တာကိုးကွ ခုကိုဒေါသတွေထွက်ကြ စတေးတပ်တွေရေးကြနဲ့ မကြည့်ဖြစ်တဲ့လူကလဲဒါတွေကြားသိရပြီးကြည့်ချင်လာမယ် ကြည့်နေတဲ့သူတွေကလဲ
ဒါမယ့်သတင်းကြားမိတာက အန်ကယ့်ချစ်သူစနက်ပါတယ်ဆိုလားဘာလား သိပါဘူးးးးးးး
အချစ်ရေ အန်ကယ်လူကြမ်းကြီးဘာာာာ…” ဆိုပြီး အိမ့်ချစ်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ မောင်ချိုရော ဖြိုးမြတ်အောင်ရောကောင်းပါတယ်..” “အမခုပြောချင်တာလဲအဲ့ဒါပဲ အပန်းပြေရုံပဲကြည့်ကြပါ လို့အ ကြံပေးချင်တာ ပြီးတော့လူစွဲထက် တကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုပဲမဲပေးစေချင်တာ” ဆိုပြီး Comment တွေ ကို Reply ပြန်ထားပါတယ်။
“ကျ​နော်​ ဂီတအ​ကြောင်း​တော့ သိပ်​နားမလည်​ဘူးဗျ ​ကောင်းတဲ့သူကို မပြုတ်​​စေချင်​တာ​တော့အမှန်​ပဲ MI ဆိုတာစီးပွား​ရေး program တစ်​ခု​ဖြစ်​​ကောင်းဖြစ်​နိုင်​တယ်​
ဒါ​ပေမဲ့ ဖြိုးမြတ်​​အောင်​က ဂီတနဲ့ပတ်​သတ်​ရင်​ စန်း ​တော်​​တော်​ရှိတယ်​ အမ အိမ့်​ချစ်​လိုပါပဲ သူပြီးရင်​ ​မောင်​ချို ​ငွေဇင်​လှိုင်းကြိုက်​တယ်​ အပြုသ​ဘော သိသ​လောက်​ ဝင်​မန့်​တာပါ ..” ဆိုပြီး ပရိသတ်တစ်ယောက်ရဲ့ Comment ကိုလဲ အိမ့်ချစ်က ….
“အမနဲ့မောင်လေးအကြိုက်တူတယ် အမလဲတစ်ယောက်ထဲအားမပေးဘူး သူတို့သုံးယောက်လုံးဒီတစ်ပတ်ကောင်းကြတယ်..” ဆိုပြီး ပြန်ပြောထားတာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။
ဦးသိနျးတနျဘကျကနေ ရပျတညျပေးလိုကျတဲ့ အိမျ့ခဈြ
Myanmar Idol ကတော့ လကျတလောမှာ အရမျးကို နာမညျကွီးနတေဲ့ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲပါ။ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာပျေါမှာ အတျောလေး လူပွောမြားနတေဲ့ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲပါ။ပွိုငျပှဲ တဈခု ပွီးတိုငျးလညျး ဝဖေနျပွောဆိုသံတှေ အမြား ကွီး ထှကျပျေါလရှေိ့တဲ့ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲပါ။ဇူလိုငျလ(၁၉)ရကျနညေ့က Myanmar Idol Season3ရဲ့ Rock Week ပွိုငျပှဲကို ကငျြးပခဲ့ပါတယျ။
ဒီပွိုငျပှဲကတော့ ပရိသတျတှရေော၊အနုပညာရှငျအသိုငျးအဝိုငျးကွားမှာပါ အတျောလေးကို လူပွောမြားနပေါတယျ။ဒိုငျေ တှ၊ပွိုငျပှဲဝငျတှအေပျေါဝဖနျ ပွောဆိုသံတှလေဲ အမြားကွီးကို ထှကျပျေါနပေါတယျ။လကျတလောမှာ ဒိုငျတှထေဲက တဈယောကျဖွဈတဲ့ အနျကယျဦးသိနျးတနျအပျေါ ဝဖေနျပွောဆိုသံတှေ အမြားကွီး ထှကျပျေါ နပေါတယျ။ အဆိုတျော အိမျ့ခဈြကတော့ သူမြားတှကေ ပွောဆိုဝဖေနျနကွေတဲ့ မွနျမာပွညျဦးသိနျးတနျဘကျကနေ ရပျတညျပေးလိုကျပါတယျ။
“အနျကယျ့ကိုအပွဈမမွငျကွပါနဲ့ခှာ အစီအစဉျရဲ့ စိတျဝငျစားမှုနှုနျးမွငျ့တကျလာဖို့ သူကဇာတျလမျးစနရေတာပါ ဒါမှလူတှပေါးစပျဖြား ပွောစမှတျတှဖွေဈလာမယျ လူပွောမြားမှပိုအောငျမွငျတာကိုးကှ ခုကိုဒေါသတှထှေကျကွ စတေးတပျတှရေေးကွနဲ့ မကွညျ့ဖွဈတဲ့လူကလဲဒါတှကွေားသိရပွီးကွညျ့ခငျြလာမယျ ကွညျ့နတေဲ့သူတှကေလဲ
ဒါမယျ့သတငျးကွားမိတာက အနျကယျ့ခဈြသူစနကျပါတယျဆိုလားဘာလား သိပါဘူးးးးးးး
အခဈြရေ အနျကယျလူကွမျးကွီးဘာာာာ…” ဆိုပွီး အိမျ့ခဈြက ပွောခဲ့ပါတယျ။
“ မောငျခြိုရော ဖွိုးမွတျအောငျရောကောငျးပါတယျ..” “အမခုပွောခငျြတာလဲအဲ့ဒါပဲ အပနျးပွရေုံပဲကွညျ့ကွပါ လို့အ ကွံပေးခငျြတာ ပွီးတော့လူစှဲထကျ တကယျကောငျးတယျဆိုတဲ့သူတှကေိုပဲမဲပေးစခေငျြတာ” ဆိုပွီး Comment တှေ ကို Reply ပွနျထားပါတယျ။
“ကြ​နျော​ ဂီတအ​ကွောငျး​တော့ သိပျ​နားမလညျ​ဘူးဗြ ​ကောငျးတဲ့သူကို မပွုတျ​​စခေငျြ​တာ​တော့အမှနျ​ပဲ MI ဆိုတာစီးပှား​ရေး program တဈ​ခု​ဖွဈ​​ကောငျးဖွဈ​နိုငျ​တယျ​
ဒါ​ပမေဲ့ ဖွိုးမွတျ​​အောငျ​က ဂီတနဲ့ပတျ​သတျ​ရငျ​ စနျး ​တျော​​တျော​ရှိတယျ​ အမ အိမျ့​ခဈြ​လိုပါပဲ သူပွီးရငျ​ ​မောငျ​ခြို ​ငှဇေငျ​လှိုငျးကွိုကျ​တယျ​ အပွုသ​ဘော သိသ​လောကျ​ ဝငျ​မနျ့​တာပါ ..” ဆိုပွီး ပရိသတျတဈယောကျရဲ့ Comment ကိုလဲ အိမျ့ခဈြက ….
“အမနဲ့မောငျလေးအကွိုကျတူတယျ အမလဲတဈယောကျထဲအားမပေးဘူး သူတို့သုံးယောကျလုံးဒီတဈပတျကောငျးကွတယျ..” ဆိုပွီး ပွနျပွောထားတာကိုလဲ တှရေ့ပါတယျ။
အဆိုတော် မနောတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ရဲ့ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ကို ထပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ အမ်တီဗွီပါ သေချာရိုက်ထားတဲ့ ဒီသီချင်းကို မနေ့ မတ်လ ၁၄ ရက်ညကပဲ သူအသုံးပြုတဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကတော့ ကလေးငယ်တွေ စာဖတ်ဝါသနာပါဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တင်လိုက်ပြီနော် အားပေးပါအုန်းဗျာ ရတနာတစ်ပါးကလေးငယ်လေးများ …
ထိပ်ထားသခင်လေးကတော့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ စကားအရမ်းပြောတတ်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေစတင်ပြီးသတိထားမိခဲ့သူလေးပါ။ မင်းသမီးလုပ်ရင် တီဗီထဲကို ဖောက်ဝင်ရမှာလားဆိုတဲ့စကားလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေက သဘောကျခဲ့ကြသူပါ။ ထိပ်ထားလေးအကြိုက်ဆုံးမင်းသမီးကတော့ ဖွေးဖွေးဖြစ်ပြီး ထိပ်ထားလေးဟာလည်း ဖွေးဖွေး ငယ်ဘဝကပုံတွေနဲ့ တူနေတာကြောင့်လည်း ဖွေးဖွေးက ချစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ထိပ်ထားလေးဟာခုဆိုရင် ကြော်ငာတွေအပြင် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေပါ ရိုက်ကူးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ကူးရမယ့် ရုပ်ရှင်ကားကြီးဟာ ကမ်းခြေမှာသွားရောက်ရိုက်ကူးရမှာဖြစ်တာကြောင့် ထိပ်ထားလေးအမေက ပြင်ဆင်ဖြစ်ပုံလေးတွေကို …